Home / Always Be Useful
🔹“ အမှားတွေလုပ်ပြီး ရှင်သန်ခြင်းက ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေထိုင်ခြင်းထက် ဘဝမှာ ပိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်” လို့ George Bernard Shaw ဆိုခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
🔹 ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလိုလို ကို ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲလို့ မေးလိုက်ကြရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားကြဖို့လို့ပဲ ဖြေဖူး ကြားဖူးကြတယ်။
🔹ဘာကြောင့် ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရုန်းကန်ကြလဲ လို့မေးရင်လည်း တချိန်ချိန်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်လို့ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပဲ အဖြေရှိကြတယ်။
🔹 ကျွန်တော်အပါအဝင် ကျွန်တော့်ဘေးက လူတိုင်းလည်း ပျော်စရာ ကောင်းအောင် နေရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ ဘဝမှာ ရှင်သန်နေကြတာပါပဲ။
🔹 ဒါကြောင့်လည်း တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ တကယ်လိုအပ်ရဲ့လား မသိတဲ့အရာတွေ အပျော်သဘောအနေနဲ့ ဝယ်ကြတယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင် ခရီးတွေထွက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မနှစ်သက်တဲ့ လူနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေရတယ်။ ကိုယ် မကျေနပ်တဲ့လူဆီကနေတောင် ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားနေရတယ် စသဖြင့်ပေါ့။
🔹 ဒါပေမယ့်အချိန်တန်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရွှင်မှုနောက်ကို ဘာကြောင့်လိုက်နေကြတာလဲ?
တကယ့် ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်ဆိုတာမျိုးကိုရော ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ လိုက်ရှာ ဖန်တီးယူနေရဦးမှာလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ အဲလိုတွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ဘာကြောင့် ရှင်သန်နေကြတာများလဲ တွေးမိဖူးကြလား ?
🔹ဒီလို ဆို မေးစရာရှိတာက ခရီးသွားတယ်။ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်တယ်။ ညစာစားတယ်။ ဖုန်းရှိတယ်။ကားရှိတယ်။ စသည်ဖြင့် ဒီ အရာတွေက ခင်ဗျားကို ပျော်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလား ဆိုရင်တော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် လို့ ဖြေရမှာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဘာကိုမှ ဖန်တီးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေရသလိုမျိုးပေါ့။
ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော်လည်း ခရီးထွက်တာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ရတာမကြိုက်လို့လားဆိုရင် လူ့သဘာဝအရတော့ ကြိုက်တာပဲဗျ။ ဆိုလိုချင်တာက ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမြဲနေနေဖို့ဆို ဒီလိုအရာတွေ တသက်လုံး လုပ်နေရုံနဲ့ တော့ အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
🔹Emerson က ပြောဖူးတယ်။ ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ ပျော်နေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အသုံးဝင်ဖို့၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိဖို့နဲ့ အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကို သိမြင်ပြီး နေတတ်ဖို့ပဲ” တဲ့။
🔹ဒီ Quote ကြီးဖတ်လိုက်ရင်တော့ ဘဝမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး နဲ့ အကြီးကြီတွေလို့ ထင်ကောင်းထင်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။ ဘဝကြီးမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့။
🔹ဒီတော့ တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘဝမှာ ကိုယ်က အသုံးဝင်တယ်လို့ ခံစားမိတာမျိုး ဘယ်တုန်းက ဖြစ်ဖူး ကြုံဖူးကြလဲ? ဘယ်လို အရာကိုလုပ်ရင်း နဲ့ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမိတာလဲ ?
ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်လိုက်တာမျိုး ကို ပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူး။
ဥပမာ ကိုယ့်တာဝန်မဟုတ်တာမျိုးကိုတောင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ကူညီပေးလိုက်တာမျိုး။
🔹အမေကို ပစ္စည်းတွေ ကူသယ်ပေးလိုက်တာမျိုး။ ဘတ်စ်ပေါ်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုကို နေရာဖယ်ပေးလိုက်တာမျိုး၊ မျက်မမြင် အဘိုးအိုကို ကားလမ်းကူညီ ကူးပေးလိုက်တာမျိုး။
🔹ကိုယ်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်တာမျိုး။ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ဗဟုသုတကို သိသင့်သိထိုက်သူတွေကို ပြောပြမိတာမျိုး၊ ကိုယ့် လက်အောက်ငယ်သားကို ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံပြောဆိုတာမျိုး။
🔹ဒါမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလို အချက်တွေလုပ်မိတဲ့အခါ ကိုယ်က လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အသုံးဝင်တယ်လို့ ခံစားမိပြီး ပျော်ရွင်ရတယ်။ ခင်ဗျားမှာလည်း ခင်ဗျားကိုယ်ကို အသုံးဝင်တယ်လို့ ခံစားမိစေတဲ့ ဒီလို နိစ္စဒူ၀ အပြုအမူ ၊အချက်အလက်လေးတွေ ရှိနေမှာပါ။
🔹 ကြီးးကြီးမားမား ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုက တဆင့် ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာလာတာကမှ ပျော်ရွှင်မှု အစစ်ပါ။
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးမိတာလေးဗျ။ လူအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘာမှ အကျိုးမပြုဘဲ နေထိုင်မိခြင်းက ဝမ်းနည်းဖို့အကောင်းဆုံးသော ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုပဲတဲ့။
🔹ကျွန်တော်ကတော့ အပြည့်အ၀ လက်ခံတယ်။ မနက်နိုးလာတဲ့အခါ ငါက ဘာအတွက် ရှင်သန်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ကိုယ့်မှာ အဖြေ မရှိတဲ့အချိန်က ဝမ်းနည်း စိတ်ဓာတ်ကျစရာ အကောင်းဆုံးပဲ မှတ်လား ?
🔹ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ် လုပ်ဆောင်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် တစုံတခုအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အသုံးဝင်အောင် နေထိုင်ပေးကြည့်ပါ။ ဘယ်လို နည်းလမ်းမျိုးနဲ့မဆိုပေါ့။
ဘဝဆိုတာ အသုံးဝင်စွာနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ မဟုတ်လား။
(The Purpose Of Life Is Not Happiness: It’s Usefulness ဟူသော ဆောင်းပါးကို မှီငြမ်းဘာသာပြန်ရေးသာထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)